ESI TINYE WINDOWS XP NA VIRTUALBOX - VIRTUALBOX - 2019
Market Google Market, ịbụ otu n'ime akụkụ ndị kachasị mkpa nke sistemụ arụmọrụ Android, anaghị arụ ọrụ mgbe niile. Mgbe ụfọdụ na usoro nke eji ya, ị nwere ike iche ụdị nsogbu niile. N'ime ndị ahụ na njehie na-ezighị ezi na koodu 504, iwepụ nke anyị ga-agwa taa.
Njehie njehie: 504 na Ụlọ Ahịa Play
Ọtụtụ mgbe, njehie egosipụtara na-eme mgbe ị na-etinye ma ọ bụ na-emelite ngwa ngwa nke Google na ụfọdụ ihe omume nke atọ nke chọrọ nbanye akaụntụ na / ma ọ bụ ikike na ha. Nsogbu algorithm nsogbu na-adabere na nsogbu nke nsogbu ahụ, ma iji mezuo arụmọrụ kachasị mma, ị ga-arụ ọrụ n'ụzọ zuru ezu, ma ọ bụ na-agbaso ndụmọdụ niile anyị nyere n'okpuru ebe njehie na koodu 504 na Google Play Market ga-apụ n'anya.
Hụkwa: Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ngwa na android adịghị emelite
Usoro 1: Nyocha Njikọ Ịntanetị
Ọ ga-ekwe omume na ọ dịghị ihe dị mkpa kpatara nsogbu anyị na-atụle, ma tinyeghị ngwa ahụ maọbụ ọ bụghị emelite naanị n'ihi na ọ nweghị njikọ Ịntanetị na ngwaọrụ ma ọ bụ na ọ bụ ejighị n'aka. Ya mere, nke mbụ, ị kwesịrị ị jikọọ na Wi-Fi ma ọ bụ chọta ebe dị elu ma nwee ike 4G mkpuchi, wee weghachite nbudata ngwa ahụ nke njehie 504 mere. Isiokwu ndị na-esonụ na saịtị anyị.
Otu esi eme ka 3G / 4G na gam akporo
Esi mee ka ọsọ ọsọ nke Intanet na gam akporo
Gini mere ngwaọrụ Android anaghị ejikọta na netwọk Wi-Fi
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na mobile Internet na gam akporo anaghị arụ ọrụ
Usoro 2: Debe ụbọchị na oge
Ụdị ihe ahụ yiri obere ihe, dị ka oge na ụbọchị na-ezighị ezi, nwere ike inwe mmetụta dị njọ na ọrụ nke usoro ihe arụ ọrụ niile nke Android. Enweghị ike ịwụnye na / ma ọ bụ melite ngwa ahụ, tinyere koodu 504, bụ naanị otu n'ime ihe ndị nwere ike ịkpata.
Smartphones na mbadamba achọpụtala oge oge na ụbọchị nke a na-akpaghị aka, yabụ n'enweghị mkpa ọ bụla, a gaghị agbanwe agbanwe ndabara ndabara. Ọrụ anyị na nke a bụ ịlele ma enwetara ha n'ụzọ ziri ezi.
Meghee "Ntọala" ngwaọrụ mkpanaka gị ma gaa "Ụbọchị na Oge". Na nsụgharị nke gam akporo ọ bụ na ngalaba. "Usoro" - nke ikpeazụ n'ime ndepụta nke dịnụ.
Jide n'aka na netwọk, oge na oge mpaghara kpebiri site na netwọk, ma ọ bụrụ na nke a abụghị ikpe, mee nchọpụta akpaka site na ịgbanwere mgbanaka kwekọrọ na ọnọdụ nọ n'ọrụ. Ubi "Họrọ mpaghara oge" ọ gaghị adị maka mgbanwe.
Rụgharịa ngwaọrụ ahụ, malite Ụlọ ahịa Google Play ma gbalịa ịtinye na / ma ọ bụ emelite ngwà ahụ nke njehie mere n'oge gara aga.
Ọ bụrụ na ịchọta ozi ọzọ na koodu 504, gaa na nzo nke ọzọ - anyị ga-eme ihe ọzọ.
Hụkwa: Gbanwee ụbọchị na oge na gam akporo
Nzọụkwụ 3: Kọwaa cache, data, na ihichapụ mmelite
Ụlọ Ahịa Google bụ naanị otu n'ime njikọ dị na ngwà ahụ a na-akpọ gam akporo. Ụlọ ahịa ngwa ngwa, ya na ya, Google Play na ọrụ mmemme Google, ruo ogologo oge, ejiri ihe ndekọ faịlụ - ihe ntanetị na data nke nwere ike igbochi arụmọrụ nkịtị nke sistemụ arụmọrụ na ihe ndị dị na ya. Ọ bụrụ na ihe kpatara njehie 504 dị na nke a, ị ghaghị ime usoro ndị a.
Na "Ntọala" ngwaọrụ mkpanaka oghe oghe "Ngwa na Ịma Ọkwa" (ma ọ bụ naanị "Ngwa", dabere na mbipute nke gam akporo), ma na ya gaa ndepụta nke ngwa niile awụnyere (n'ihi na nke a nwere ihe dị iche).
Chọta Ụlọ Ahịa Google na ndepụta a ma pịa ya.
Gaa na ihe "Nchekwa"wee pịazie bọtịnụ ndị ọzọ Clear Cache ma "Ghichapụ data". Na windo a na-emepụta ya na ajụjụ ahụ nyere nkwenye gị iji dozie.
Gaa na peeji nke "Banyere ngwa ahụ"ma pịa bọtịnụ ahụ "Wepu mmelite" (enwere ike ịchekwa ya na menu - oghere vertical atọ dị n'akụkụ aka nri aka nri) ma kwado atụmatụ siri ike gị.
Ugbu a, megharịa nzọụkwụ # 2-3 maka ọrụ Google Play na ọrụ ọrụ ọrụ Google, ya bụ, kpuchie cache ha, ihichapụ data ma hichapụ mmelite. Enwere uzo di mkpa nuances ebe a:
Bọtị maka ihichapụ ọrụ ndị a na ngalaba "Nchekwa" enweghị, ebe ọ bụ "Jikwaa ebe gị". Pịa ya na mgbe ahụ "Hichapụ data niile"emi odude ke idak isọn̄. Na window windo, kwenye nkwenye gị ka ihichapụ.
Okpokoro Ọrụ Google bụ usoro usoro nke na-ezighị na ndabara nke ngwa niile. Iji gosiputa ya, pịa ebe akara atọ dị na nri nke panel. "Ozi ngwa"ma họrọ ihe "Gosi usoro usoro".
A na-eme ihe ndị ọzọ n'otu ụzọ ahụ dị ka ọ dị n'ahịa Market, ma e wezụga na mmelite maka shea a enweghị ike iwepụ.
Rụgharịa ngwaọrụ gam akporo gị, gbasaa Ụlọ Ahịa Google ma lelee maka njehie - ma eleghị anya ọ ga-edozi ya.
Ọtụtụ mgbe, ikpochapụ Google Play Market data na Google Play Ọrụ, yana ịlaghachi na mbipute mbụ (site na ihichapụ melite), wepụ ọtụtụ n'ime "nọmba" njehie na Ụlọ Ahịa.
Hụkwa: Agbanwe njehie koodu 192 na Google Play Market
Usoro 4: Tọgharia na / ma ọ bụ hichapụ nsogbu ahụ nsogbu
Ọ bụrụ na emebeghị ka njehie 504 ahụ kwụsị, a ghaghị ịchọpụta ihe kpatara ya na ngwa ahụ. O yikarịrị ka ọ ga-enyere aka ịtinye ma ọ bụ tọgharịa ya. Nke a na-emetụta ihe eji emepụta ngwa ngwa gam akporo na sistemụ arụmọrụ ma ọ bụghị n'okpuru ntinye.
Hụkwa: Otu esi ewepụ ngwa YouTube na gam akporo
Wepu ngwa ngwa nwere nsogbu ma ọ bụrụ na ọ bụ ngwaahịa ọzọ,
ma ọ bụ weghachite ya site na ikwughachi usoro site na ntụgharị # 1-3 nke ụzọ gara aga, ma ọ bụrụ na ọ bụ ntọala.
Hụkwa: Wepụ ngwa na gam akporo
Malitegharia ngwaọrụ mkpanaka gị, mepee Google Play Store na wụnye ngwa ngwa, ma ọ bụ gbalịa imelite ndabara ma ọ bụrụ na ị rụgharịa ya.
Ọ bụrụ na ị mere niile omume site na ụzọ atọ gara aga na ndị na anyị na-atụ aro ebe a, koodu nhiere koodu 504 kwesịrị fọrọ nke nta ka-apụ n'anya.
Usoro 5: Gbanyụọ ma tinye akaụntụ Google
Ihe ikpeazu a ga - eme na mbuso nsogbu anyị na - atụle bụ nhichapụ akaụntụ Google eji dị ka isi na smartphone ma ọ bụ mbadamba na njikọta ya. Tupu ịmalite, jide n'aka na ị maara aha njirimara gị (email ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ ekwentị) na paswọọdụ. Otu ụdị algorithm nke omume ndị a ga-arụ, anyị na-atụlerịrị na mbụ na isiokwu dị iche iche, anyị kwadoro ka ị gụọ ha.
Ihichapu akaụntụ Google ma tinye ya
Banye na akaụntụ Google gị na ngwaọrụ gam akporo gị
N'adịghị ka ọtụtụ nsogbu na ọdịda na Google Play Market, njehie na koodu 504 enweghị ike ịkpọ dị mfe. Ma, na-agbaso ndụmọdụ ndị anyị tụlere n'isiokwu a, ị ga-enwe ike ịwụnye ma ọ bụ melite ngwa ahụ.
Hụkwa: Idozi njehie na Google Play Market